पिलो ठीक पार्ने घरेलु उपाय ! - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
Home / दिव्य निरोग / पिलो ठीक पार्ने घरेलु उपाय !
पिलो ठीक पार्ने घरेलु उपाय !
Posted on October 16, 2017 by Dibya Jyotish in दिव्य निरोग with0Comments
प्राय अधिकाशंमा पिलोको समस्याले जीवनकालको कुनै न कुनै खण्डमा दुख दिएकै हुन्छ । बच्चा देखि बुढाबुढी सम्मलाई पिलोको समस्याले हुरुक्कै पार्छ । गाँउ घरतिर पिलोलाई बिभिन्न नामले सम्बोधन गरिन्छ । एकमुखे पिलो सातमुखे पिलो , हाडे पिलो आदि ।
यसका कारण हुने घाउ अन्यभन्दा अलिक फरक र पीडादायी हुन्छ । पिलो भएमा शरीरका कुनै भागमा फोकाजस्तो देखिन्छ र त्यसमा पीप जम्न थाल्छ । पिलोको समस्या शरीरको कुनै पनि अंगमा हुनसक्छ । यद्यपि, हातगोडा, पिठ्युँ, काखीमुनि र जाँघको वरिपरि यस्तो समस्या बढी हुने गर्छ । पिलो भएमा शरीरको कुनै अंग रातो हुने, फुल्ने, सुन्निने, ढुसी पर्ने, पीप जम्मा हुने र पीप निस्कने गर्छ । पिलो भएमा उपचारका लागि बजारमा विभिन्न औषधी र मलम किन्न पाइन्छ । जबकि, आयुर्वेदिक औषधीद्वारा यसको समस्याबाट सजिलै मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
लप्सिको भित्री दानो लिनुहोस् । त्यसको बाहिरि अमिलो सबै जानेगरि पखाल्नुहोस् र सफा सिलौटामा घोट्नुस । त्यसबाट बनेको लेप पिलो निस्किएको ठाउमा दल्नुहोस् । जस्तो सुकै कडा खालको पिलो पनि ठिक हुन्छ । नपाकेको र अररिएर दुखेको छ भने पनि यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । जसले छालालाई नरम बनाउछ र पिलोको मुख छिटै पाकेर खिल निस्कन्छ ।